Mmalite nke ụlọ ọrụ mbadamba na Paseky nad Jizerou malitere na 1882, mgbe brothersmụnne Rössler guzobere ụlọ ọrụ maka mmepụta kaadiboodu eji aka ọcha. ngwaahịa ụlọ ọrụ iko na mpaghara Jablonec. A na-ahụ oge niile nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbasawanye nke mmemme na imepụta ihe.
IHE NDỊ ANYỊ BỤ:
Organic mmepụta na ngwaahịa na-egosi oke ọrụ anyị metụtara gburugburu ebe obibi.
Omume bụ otu n'ime iwu kachasị elu maka mmekọrịta dị n'ime na n'azụ ụlọ ọrụ.
Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa na ndị ọrụ ahịa bụ ọrụ anyị pụtara ìhè.
Onyinye anyị n’inweta ịdị mma nke ndụ niile abụghị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ.
Ọrụ kachasị mma ziri ezi bụ ntinye aka anyị maka mmepe mmepe nke mpaghara.
EMBA na-etinye aka na ọrụ ebere na nke mmadụ. Ọ na-ekere òkè n'ịkwalite ọrụ bara uru nke ọha na eze na ikike nke obodo iji mee ihe karịrị ókèala Czech Republic.
EMBA emeriwo Erite Ohere nke Mba Ngwurugwu Mba, otu asọmpi nke ndi n'oru n'oru nke ndi na eme ka ndi mmadu nwere nkwarue ike na-aru oru n'ile ahia, na-etinye aka n'inwe ihe jikota ha n'ime obodo.